Ichi chinhu chimwe chingaite Isla Fisher kurambana Sacha Baron Cohen - Nhau
Ichi chinhu chimwe chingaite Isla Fisher kurambana Sacha Baron Cohen
Isla Fisher nemurume wake Sacha Baron Cohen vanga vakaroora vachifara kwemakore masere, asi aigona kunyora mapepa ekurambana munguva pfupi kana akafunga kutanga kutamba mitambo… zvakanaka, mutambo mumwe. Tag, kuti ive yakananga.
Iye mutambi nyeredzi mune iri kuuya bhaisikopo 'Tag,' iyo inoratidza vatambi vari kutora chikamu mumakumi matatu-gore mutambo wemutambo wehucheche. Kana kwake kukaitika muhupenyu chaihwo, zvakadaro, kungave kuri kuita kutyora.
'Kutendeseka, [Kana izvo zvikaitika], ndiri kubvisa ringi ndichimukanda kumeso kwake, 'Isla achiseka achitaurira Nova 96.9. 'Handidi kukwezvwa nemumwe munhu aka [tamba mutambo wacho]. Makumbo angu [aigona] kukiya oremerwa nokusingaperi. '
Isla's 'Tag' nyeredzi nyeredzi Annabelle Wallis zvakamushamisa, zvichisimudza antics dzaSacha zvekare. Isla, zvakadaro, akataura kuti mazhinji emanyepo emurume wake akaitirwa zvakaitirwa 'kunaka kwejoko.'
'Ndingaita chero chinhu chejee,' akadaro
Kuroora Sacha zvirokwazvo kune kwakasarudzika, sezvo achigara achisundira miganhu mumafirimu ake.
Mu2016, Isla akataura nemagazini ye Square Mile nezve muchato wake nematambudziko asingawanzo anouya kubva mukuroora mutambi we 'Borat'.
'Pane imwe nguva, Sacha akadzoka kubva kubasa apo aipfura' Bruno 'uye aive nerutsvuku welts uye ropa kumusana kwake, uye chigunwe chake chakatyoka,' akadaro. 'Chaive mhedzisiro yechiitiko chine chaiyo-tsoka-ina-mana dominatrix uyo akaedza kumumanikidza kurara naye. Pandakamubvunza zvainge zvaitika, akangoti kwaive 'kukuvara kubasa.' '
Mukadzi waHarvey Weinstein aimbova mudzimai Georgina Chapman ari kufambidzana naAdrien Brody: Report
bruce jenner kudzokera pakuva murume
ndinoda kuva bruce zvakare
Janet jackson anotsemuka kubva kumurume
mifananidzo yemurume waJanet jackson